Nhau - Chii chinonzi Ultra-yakajeka girazi? Ndeupi musiyano neakajairika girazi?
1. Hunhu hwegirazi rakanyatsojeka
Ultra-yakajeka girazi, inozivikanwawo seyakajeka-girazi girazi uye yakaderera-simbi girazi, iri mhando yegirazi-yakajeka yegirazi resimbi. Yakakwira sei kupenya kwayo kwechiedza? Iyo mwenje inotumira yegirazi-yakajeka girazi inogona kusvika inopfuura 91.5%, uye ine hunhu hwekukwirira-kumagumo kukwirira uye kuchena kwekristaro. Naizvozvo, inodaidzwa kuti "Crystal Prince" mumhuri yegirazi, uye girazi rakanyatsojeka rine michina yepamusoro, yemuviri uye yemaziso, ayo asingasvikike nemamwe magirazi. Panguva imwecheteyo, girazi rakanyatsojeka rine zvese zvinoshandiswa pakugadzira girazi remhando yepamusoro. , Saka inogona kugadziriswa seimwe inoyerera girazi. Iyi yepamusoro yechigadzirwa mashandiro uye mhando inogadzira yakachena-chena girazi ine yakafara nzvimbo yekushandisa uye yepamusoro musika tarisiro.
2. Iko kushandiswa kwegirazi-yakajeka girazi
Kune dzimwe nyika, girazi rakanyatsojeka rinonyanya kushandiswa muzvivakwa zvepamusoro-soro, kugadziridza magirazi ekugadzirisa uye rezuva photovoltaic keteni madziro, pamwe nemidziyo yepamusoro yegirazi, girazi rekushongedza, zvigadzirwa zvekunyepedzera kwekristaro, girazi regirazi, chaiyo zvemagetsi ( macopers, scanner), zvivakwa zvakakosha, nezvimwe.
MuChina, iko kushandiswa kwegirazi-yakajeka girazi riri kukurumidza kukura, uye iko kushandiswa muzvivakwa zvepamusoro-soro uye zvivakwa zvakakosha zvakavhurwa, senge Beijing National Grand Theatre, Beijing Botanical Garden, Shanghai Opera House, Shanghai Pudong Airport, Hong Kong Kokorodzano uye Exhibition Center, Nanjing Chinese Art Mazana emapurojekiti kusanganisira epakati akashandisa girazi rakajeka. Fenicha yepamusoro-soro uye marambi ekushongedza ekumusoro-soro atangawo kushandisa girazi rakajeka-rakajeka muhuwandu hwakawanda. Pane fenicha uye yekugadzirisa michina inoratidzirwa yakaitirwa muBeijing, yakawanda girazi fenicha inoshandisa ultra-yakajeka girazi.
Se substrate zvinhu, yakajeka-yakajeka girazi inopa yakakura nzvimbo yekuvandudza yekuvandudza kweesimba simba tekinoroji neayo akasiyana akasarudzika mwenje kutumira. Iko kushandiswa kweiyo yakajeka-yakajeka girazi seiyo substrate yemagetsi ezuva uye mafotoelectric ekushandura sisitimu budiriro musimba rezvesimba rekushandisa tekinoroji mupasi, izvo zvinovandudza zvakanyanya fotoelectric kutendeuka kushanda. Kunyanya, nyika yangu yatanga kuvaka mhando nyowani yezuva photovoltaic keteni rusvingo rwekugadzira mutsara, iyo inoshandisa yakawanda yegirazi-yakajeka girazi.
3. Musiyano uripo pakati peiri-yakajeka girazi uye girazi rakajeka:
Musiyano uripo pakati pezviviri ndi:
(1) Akasiyana simbi zvemukati
Musiyano uripo pakati peyakajairika girazi rakajeka uye girazi re Ultra-rakajeka mukujeka ndiyo inonyanya mutsauko muhuwandu hwesimbi oxide (Fe2O3). Izvo zvirimo zveyakajairika chena girazi yakawandisa, uye zvirimo zve Ultra-yakajeka girazi ishoma.
(2) Chiedza chinotakura chakasiyana
Sezvo izvo zvemukati simbi zvakasiyana, iko kutapudza kwechiedza kwakasiyanawo.
Chiedza chinotakura chenguva chena girazi chingangoita 86% kana zvishoma; girazi rakacheneruka-chena mhando yegirazi-yakajeka yegirazi-yesimbi, inozivikanwa segasi-girazi regirazi uye girazi rakakwira-girazi. Chiedza chekutumira chinogona kusvika kupfuura 91.5%.
(3) Kuyerera kwega kwega kwegirazi kwakasiyana
Nekuti izvo zvigadzirwa zvegirazi rakachenesa-yakajeka zvinowanzove nemarara mashoma seNiS, uye kudzora kwakanaka panguva yekunyungudika kwezvinhu zvakasvibirira, girazi rakanyatsojeka rine rakafanana rakaenzana kupfuura girazi chairo uye rine maronda mashoma emukati, ayo zvakanyanya inoderedza mukana wekupenga. Mukana wekuzviparadza.
(4) Yakasiyana mavara kuenderana
Sezvo iyo simbi yezvinhu mune yakasvibirira ingori 1/10 kana kunyangwe yakaderera pane iyo yakajairwa girazi, yekupedzisira-yakajeka girazi rinotora zvishoma mune yakasvibirira bhendi reinooneka mwenje kupfuura yakajairwa girazi, ichiona kuenderana kwe girazi ruvara.
(5) Zvakasiyana tekinoroji zvemukati
Ultra-yakajeka girazi ine yakakwenenzverwa kumusoro kwetekinoroji zvemukati, yakaoma kugadzirwa kudzora, uye riine simba purofiti kana ichienzaniswa neyakajairika girazi. Yakakwira mhando inosarudza mutengo wayo unodhura. Mutengo wegirazi-chena girazi iri ka1 kusvika ku2 nguva yegirazi yakajairwa, uye mutengo wacho hauna kunyanya kukwirisa kupfuura girazi rakajairwa, asi chipingamupinyi chehunyanzvi chakakwirira uye chine kukosha kwakakwirira.